﻿ ‘आफ्नै तौल घटाएपछि अरुलाई सिकाउन व्यायमशाला खोलेँ’
बिहीबार ३०, जेठ २०७६
हुन त उनी आइटीकी विद्यार्थी हुन् । तर आइटी पढ्दा पढ्दै उनले फलाम उचाल्न थालिन् । लामो समय डेनमार्कमा बसेर भर्खरै नेपाल आएकी ममता पर्साइले आइटी सपना छाडेर अहिले मानिसहरुलाई फिटनेस सिकाइरहेकी छिन् । इटहरीको वीपी चोकमा उनले खोलेको द व्यायमशाला नामक फिटनेस सेन्टरमा इटहरीवासीको भीड बढ्दो छ । बालबालिकादेखि वृद्धहरुसम्म उनको व्यायमशालामा व्यायम सिक्न आउँछन् । विदेशको सुविधा त्यागेर नेपालमा व्यायमशाला खोल्ने प्रेरणा जाग्नुको पछि उनको आफ्नै भोगाई र कथा कारकको रुपमा रहेको छ । यसै विषयमा न्युजलयको लागि सरिता भण्डारीले द व्यामशालाकी सञ्चालक ममता पर्साइसंग गरेको कुराकानीको संक्षेप :
व्यायमशाला के हो ? र यसबाट मानिसले के फाइदा लिन सक्छन् ?
व्यायमशाला भनेको जिम र फिटनेससँग सम्बन्धित छ । नेपालमा प्रायः जिम र फिटनेस भन्ने बित्तिकै छोरा मान्छेको लागी मात्र हो भन्ने बुझिन्छ । तर व्यायमशाला भनेको छोरा मान्छेलाई मात्र नभएर छोरी मान्छेको लागी पनि हो । यस्तै सुगर, प्रेसर भएका मानिसहरुको लागी पनि व्यायमशाला हो ।
अझ ९–१० वर्षका बालबालिकाहरुको लागि पनि यो ठाउँ हो । यहाँ उनीहरुलाई फुर्तिलो तथा स्वस्थ बनाउन कसरतहरु सिकाइन्छ । व्यायमशालाको मुख्य उद्देश्य नै मानिसलाई फिट र स्वस्थ बनाउनु हो । पुरुषको लागि मात्र नभई हरेक व्यक्तिलाइ फिट र स्वस्थ रहनका लागि व्यायमशाला खोलिएको हो ।
व्यायमशाला खोल्ने सोच चै कसरी र कहाँबाट आयो ?
यससम्बन्धि मेरो आफ्नै कथा छ । म पहिला ५०–५५ केजीको थिएँ । एक्कासी म मोटाएर ८१ केजि पुगेँ । बिचमा कहिले मोटाउने र कहिले घट्ने क्रम भै रहेको हुन्थ्यो । तर, एकैचोटी ८० केजि पुग्दा मलाई असहज तथा नसुहाउँदो महसुस भयो । सुत्दा, उठ्दा पनि गाह्रो हुन्थ्यो । बाहिर हिँड्दा पनि लुगाहरु मिल्दैन थियो । म आइटीको विद्यार्थी थिएँ । त्यो समयमा म आइटीमा इन्टर्न गरिरहेको थिएँ । त्यसपछि मैले घट्नकै लागि भनेर एउटा कोर्ष गरेँ । त्यो कोर्ष चै अमेरिकामा पनि छ तर अलि महंगो जस्तो लागेर मैले सिङ्गापुरमा गरेँ ।
त्यो कोर्ष सकेपछि मैले पढेको कुराहरुलाई व्यवहारमा लागु गर्दा राम्रो रिजल्ट पाएँ । ८६ केजिबाट म घटेर ६० केजि पुगेँ । म घटेको देखेपछि मेरा साथीहरु छक्क परे । उनीहरु मसँग मोटाइ घटाउने सल्लाह लिन आउन थाले । मैले भनेअनुसार गर्दै गर्दा उहाँहरुको पनि तौल घट्न थाल्यो । त्यसपछि हामीले नेपालमै आएर केही गरौं भन्ने सोँच बनायौं ।
नेपालमा जिम र फिटनेसको त्यति चलन छैन । हामीबाटै सुरु गरौं भन्ने विचारले व्यायमशाला खोलेका हौं । खासगरी आफ्नै तौल घटाएपछि अरुलाई सिकाउन व्यायमशाला खोलेका हौं ।
महिला भएर व्यायमशाला खोल्न चाहिँ कत्तिको गाह्रो भयो ?
गाह्रो त भयो नै । आइटीको विद्यार्थी मान्छे म, व्यायमशाला खोल्नु भनेको आफूले पढिरहेको भन्दा फरक काम हो । नेपाल फर्कँदै गर्दा मेरा कतिपय आफन्तहरुले सोध्नुभएको थियो कि, ‘अब आइटीमै जागीर गर्ने होला नि ?’ तर मैले उहाँहरुलाई मैले फिटनेशसम्बन्धी कोर्स गरेको छु । अब फिटनेश सेन्टर खोल्छु भन्दा ‘सुबेदि’ को बुहारीले त फलाम अचाल्ने रे भनेर समेत खिसी गर्नुभयो कतिपय आफन्तहरुले । तर जसले त्यस्तो भन्यो, आज आएर मलाई पनि पेट घटाउनु छ, बुहारी सिकाइदेऊन भन्दै आउनुभएको छ ।
व्यायमशालामा लगानी कति छ र कतिले सेवा लिइसकेका छन् ?
यसमा लगानी लगभग एक करोडको भएको छ । अहिले हामीसँग लगभग ४५० भन्दा बढिले सेवा लिइराख्नु भएको छ । जसमा विहान २५० जना आउनु हुन्छ भने अरु दिउँसो र बेलुका आउनु हुन्छ ।
प्रतिकृया राम्रो आइरहेको छ । हाम्रो पेज सामाजिक सञ्जालमा एकदम एक्टीभ छ । हामीले प्रत्येक दिन पेजमा अपडेट गरिरहेका हुन्छौँ । युवा, पुरुषहरुसँगै गृहिणीहरुसमेत हाम्रोमा आउनुहुन्छ । उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं ।
पाँच वर्षसम्म डेनमार्क बस्नु भयो । विदेशको सुविधासम्पन्न जिन्दगी छोडेर नेपाल किन फर्कनु भयो ?
हामीले उतैपनि कामको लागि भीसा एप्लाइ गरिरहेका थियौँ । तर उताको सुविधासम्पन्न जिन्दगीभन्दा नेपाल नै प्यारो लाग्यो । त्यसमाथि आफ्नो परिवार पनि यतै हुनुन्थ्यो । जहिलै विदेश बसिने हैन, बरु अहिलै गएर केहि गरौँ भन्ने सोँचले नेपाल आयौँ ।
अहिले मानिसहरु एकदम अल्छी तथा सुविधा खोज्ने भएका छन् । त्यसमाथि झन् व्यस्त बन्दैछन् । यस्तो अवस्थामा बिहानै उठेर यहाँ व्यायम गर्न आउँछन् त ?
सुरुमा चै आउनु हुन्न होला भन्ने लाग्यो तर आइराख्नु भएको छ । व्यायमशाला ५ बजे खुल्छ, तर मानिसहरु अगाडि नै आइरहनु भएको हुन्छ । यहाँ आइसकेपछि अल्छीपन हट्छ र अर्कै जाँगर आउँछ भन्नु हुन्छ ।
नेपालको स्वास्थ्य र विदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा के फरक पाउनु भयो ?
फिटनेशको हिसाबले भन्नु पर्दा विदेशमा सबैले हेल्दी खानेकुरा खाने, व्यायम गर्ने गर्दछन् । उताका मानिसहरुलाई यहाँका मानिसहरुमा हुने जस्तो सुगर, प्रेसर हुँदैन । किनभने विदेशमा प्रायः सबैले हेल्दी खानेकुरा खाने र व्यायम गर्ने गर्दछन् । तर नेपालीमा व्यायम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जागिसकेको छैन ।
अन्त्यमा समयमै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौ । आफ्नो परिवारलाई स्वास्थ्य बनाऔ । रोगले च्यापे पछि पछुताउनुअघि नै स्वास्थ्यको ख्याल राखौँ भन्न चाहन्छु ।